Izindaba - I-Golden Laser e-China International Smart Factory Exhibition
Pipe & Tube I-Laser Ukuzisika Umshini
Metal Ishidi I-Laser Ukuzisika Umshini
I-Robotic Arm 3D Laser Cutting Futhi Umshini Welding
Umshini wokusika we-Laser Wensimbi Non-metal
Golden Laser e China International Smart Factory Isentha
Golden Laser njengoba ehamba phambili imishini laser manufactory eChina bayakujabulela ukuba khona 6 China (Ningbo) International Smart Factory Isentha kanye 17th China Isikhunta Capital Expo (Ningbo Machine Ithuluzi & Isikhunta Isentha).
I-Ningbo International Robotics, i-Intelligent Processing ne-Industrial Automation Exhibition (i-ChinaMach) yasungulwa ngonyaka ka-2000 futhi isuselwe endaweni yokukhiqiza yaseChina. Kungumcimbi omuhle womkhakha wamathuluzi nemishini owaziwa futhi osekelwa nguMnyango Wezohwebo kanye noHulumeni Wabantu bakaMasipala waseNingbo. Iqembu lokugcina lomthengi esifundeni saseYangtze River Delta eChina kuyisinqumo esingcono kakhulu semishini yamathuluzi omshini, i-automation, ukukhiqizwa okuhlakaniphile, nabakhiqizi bamarobhothi ukukhulisa imakethe eNingbo, eZhejiang kanye nasendaweni yaseYangtze River Delta eChina. Ihlanganiswe ngokuhlanganyela yi-China Machinery Engineering Co., Ltd. ne-Yazhuo Exhibition Service Co., Ltd. Umbukiso we-Ningbo Machine Equipment Equipment uzobanjwa ngasikhathi sinye.
Sekuyirobhothi lasekhaya elinethonya elikhulu, ukucutshungulwa okuhlakaniphile nomkhiqizo wombukiso wokuzenzakalela kwezimboni, futhi sekunconywe kabanzi ngamabhizinisi.
IGolden Laser ifuna ukuhambisana nomjikelezo omusha wokuthuthuka kwezimboni kanye nejubane lokukhula kwezimboni ezisafufusa, isebenzisa isu le-Made in China 2025, ihlanganise futhi ihlole izidingo ezintsha, futhi idale amathuba emakethe amasha.
Sizokhombisa amasethi ama-3 wemishini yokusika i-fiber laser:
1: Okuzenzakalelayo ngokugcwele Fibre Laser Tube Cutting Machine P1260A
● I-P1260A umshini wokusika ithubhu wensimbi omncane wenzelwe amashubhu amancane (20mm-120mm).
● Ukwakhiwa okuhlanganisiwe, ukonga izindleko zokuhamba nokwenza ngcono ukusetshenziswa kwesikhala sefektri.
● Ifakwe i-ultra-high-speed chuck nohlelo lokuphakela oluzenzakalelayo, ingabona ukukhiqizwa okuzenzakalelayo futhi ithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.
2: Umshini Wokusika I-Tube Ojwayelekile we-Laser P2060B
● Kulula ukusebenza, ukwakheka okungenakho ukufakwa okungafani nalutho, okuvezwa yisevisi engaphandle kwebhokisi.
● Kushibhile ukuzuza imali emuva kokutshalwa kwemali, le-laser cutter cutter ingahlangabezana nezinhlobo ezahlukahlukene zokulungiswa kwamapayipi wokuma. Ububanzi bokusika ipayipi ububanzi busuka ku-20mm kuye ku-200mm.
3: Ultral-high Power 12000w Fibre Laser Cutting Machine GF-1530JH wensimbi sheet cutting
● Amandla okusika we-laser anamandla, angakwazi ukusika amapuleti ensimbi awugqinsi aze afike ku-60mm.
● Ubuchwepheshe bokusika umoya obunengcindezi ephansi. Ijubane lokusika umoya liphindwe kathathu ijubane lokusika umoya-mpilo, ukusetshenziswa kwamandla okuphelele kuncishiswe ngama-50%, futhi izindleko zokusebenza ziphansi.
● Ukunemba okuphezulu. I-slag eyenziwe ngesikhathi senqubo yokubhoboza isuswa ngezinga elikhulu kakhulu, futhi onqenqemeni lokusika bushelelezi futhi buphelele.
● Umthombo waseChina Laser nesilawuli seHypcut esinobungane okulula ukusisebenzisa futhi ngentengo yokuncintisana emakethe.
Ulindeni? Ake siye embukisweni bese sihlola ikhwalithi yomshini.